Nei Vamwe Vanhu VemuBhaibheri Vasingataurwi Nemazita Avo? | Q & A
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Nei Vamwe Vanhu VemuBhaibheri Vasingataurwi Nemazita Avo?
Mubhuku reBhaibheri raRute, murume akaramba kuita basa rake rokudzikinura sezvaitaurwa neMutemo waMosesi anongodanwa kuti Nhingi. (Rute 4:1-12) Izvi zvingaita kuti titi vanhu vasingataurwi nemazita avo muBhaibheri vakaipa uye havakoshi here?
Kwete. Funga nezvomumwe muenzaniso. Paaigadzirira Paseka yake yokupedzisira, Jesu akaudza vadzidzi vake kuti “pindai muguta kuna Nhingi [“mumwe murume,” The New English Bible]” kuitira kuti vagadzirire imba yacho. (Mateu 26:18) Saka tingati murume uyu ari kunzi “Nhingi” murugwaro urwu aiva akaipa kana kuti asingakoshi here? Kwete, nekuti ari kunzi “mumwe murume” uyu aitova mudzidzi waJesu. Zita rake haritaurwi nekuti rainge risingakoshi munhoroondo iyi.
Mukuwedzera, muBhaibheri mune mazita evanhu vakawanda vainge vakaipa, asiwo mune vamwe vakawanda vakatendeka vasingataurwi nemazita avo. Somuenzaniso, zita romudzimai wokutanga Evha, rinozivikanwa chaizvo. Asi udyire nokusateerera kwake zvakaitawo kuti Adhamu aite chivi icho chakazoita kuti isuwo titambure. (VaRoma 5:12) Kusiyana neizvi mudzimai waNoa haataurwi nezita muMagwaro, asi tinomutenda chaizvo kuti haana kuratidza udyire uye aitsigira murume wake nechido pabasa rake rinokosha. Zviri pachena kuti kusawanikwa kwezita rake muBhaibheri hakurevi kuti ainge asingakoshi kana kuti haana kukomborerwa naJehovha.
MuBhaibheri mune vamwe vanhu vasingataurwi nemazita, asi pane zvavakaita zvinokosha pakuzadzisa chinangwa chaMwari. Funga nezvemusikana muduku wechiIsraeri aiva muranda muimba yaNaamani, mukuru weuto reSiriya. Akataura neushingi nemudzimai waNaamani nezvemuprofita waJehovha aiva muIsraeri. Izvi zvakaita kuti pazoitika chishamiso chakakura. (2 Madzimambo 5:1-14) Mwanasikana waJefta, mutongi wechiIsraeri, akasiyawo muenzaniso wakanaka zvikuru wokutenda. Akabvuma nokuzvidira kusiya tarisiro yokuroorwa uye yokuva nevana kuitira kuti azadzise mhiko yainge yaitwa nababa vake. (Vatongi 11:30-40) Kunewo vanyori vemapisarema anopfuura 40 vasingataurwi nemazita uye vamwe vaprofita vakaita mabasa anokosha nokutendeka.—1 Madzimambo 20:37-43.
Muenzaniso unotobaya mwoyo zvikuru ndewengirozi dzakatendeka. Kune zviuru zvemamiriyoni engirozi, asi muBhaibheri mune mbiri chete dzinotaurwa nemazita adzo, Gabrieri naMikaeri. (Dhanieri 7:10; Ruka 1:19; Judha 9) Dzimwe hadzitaurwi nemazita adzo munhoroondo dzomuBhaibheri. Somuenzaniso, imwe ngirozi yakabvunzwa naManoa, baba vaSamsoni kuti: “Munonzi ani, kuti zvamataura pazvinoitika tikukudzei?” Yakapindura kuti chii? “Unombobvunzireiko zita rangu?” Nokuzvininipisa, ngirozi iyi yakaramba kupiwa rukudzo rwunofanira kupiwa Mwari chete.—Vatongi 13:17, 18
Bhaibheri haritsananguri kuti nei vamwe vachitaurwa nemazita uye vamwe vasingataurwi. Asi tinogona kudzidza zvakawanda kubva kune vakatendeka avo vakashumira Mwari vasingatarisiri kuwana mukurumbira.
Mwanasikana waJefta Aidiwa naMwari Uye Neshamwari Dzake
Verenga nezvaJefta nemwanasikana wake pana Vatongi chitsauko 11. Ungatevedzera sei zvakanaka zvaakaita?